Izindaba - Ungakuhlola kanjani ukuvela kwamabheringi angajwayelekile
Zonke izinhlobo zezibazi ezenziwa ngomshini, njengokulimala, ukuklwebheka, ukulimala kwengcindezi, imihuzuko, njll., Kuzodala ukufakwa okungekuhle, kubangele imithwalo eccentric kanye nokuhlushwa kwengcindezi, futhi kudale ukwehla kokunemba kokujikeleza nempilo yesevisi.
Ukugqwala, isikhumba esimnyama, kanye nomgodi, lezi ezimbili zokugcina zinamaphutha okulula ukugcina umswakama nokungcola, futhi kungenzeka ukuthi akhule abe ukugqwala. Ukugqwala kungumthombo wokungcola okuholela ekufakweni okungalungile, ukuguga kusenesikhathi nokukhathala. Ukugqwala okunamandla kuzokwenza ukuthi amabheringi angasebenzi.
Ukuqhekeka okuhlukahlukene, njengokuqhekeka kwempahla eluhlaza, ukuqhekeka kokwakhiwa, ukuqhekeka kokushisa ukushisa nokugaya imifantu, njll., Lokhu kuqhekeka kuzoba ngumthombo wokuxineka kwengcindezi futhi kukhule ngokushesha ngesikhathi sokusebenza kokuthwala ngokuzayo, kubangele ukuqhuma, kuthinta impilo ethwele nokuphepha kokusebenza okuhle. Empeleni, ngamabombo abalulekile, ifektri ethweleyo yenze ukuhlolwa kwe-100% kazibuthe noma kwe-radiographic ezingxenyeni zayo zezingxenye.
Ukuxebuka nokusongwa, amaphutha endawo ala maphutha amabili awahlanganisiwe nensimbi eyisisekelo, futhi kuvame ukwehla kwe-decarburization noma ukwehla kwekhabhoni okuzungezile. Okokusebenza kulula ukuwa, ukufakwa, noma ukugqoka, okuyingozi ekuthwaleni impilo nokunemba.
Ikhwalithi ye-riveting noma i-welding ye-cage, ikakhulukazi ukubona ukuthi ikhanda le-rivet alilungisiwe kahle, lisikiwe, lixega, ukuntuleka kwenyama noma "ijwabu leso eliphindwe kabili", noma ngabe indawo yokushisela ilungile, noma ngabe iphoyinti lokushisela likhulu kakhulu noma okuncane, noma ngabe akushiselwe kahle noma ngaphezulu kwe-welding Kubangela ukwenzeka kwezinto ezi-jamed rolling.